Ere nke smart nche na-aga n'ihu ịjụ | Akụkọ akụrụngwa
Ere nke smart nche na-aga n'ihu ịjụ
Ọ bụ eziokwu na anyị bụ ndị a siri ike n'oge na okwu nke ahịa nke smart ese nakwa na ndị na-emepụta onwe ha adịghị ulo oru ọhụrụ ụdị ma e wezụga Apple, ma 51,6% belata na ahịa nke afọ a tụnyere otu oge n'afọ gara aga 2015Ọ dị ezigbo elu maka ngwa nke m chere n'onwe m na-eweta ọtụtụ ọrụ na smartphones ugbu a.
O doro anya na a ghaghị tụọ ihe a na nke ahụ bụ Ọ bụghị otu ịzụta Samsung Gear S2, Apple Watch ma ọ bụ ọbụlagodi, karịa ụdị ejiji ndị ọzọ sitere na ụdị ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ. Bụrụ na ọ nwere ike, ọdịda ahịa na-apụta ìhè na nke a bụkwa mmejọ nke ndị nrụpụta yiri ka ha nwere ntakịrị akụkụ nke ngwaọrụ ndị a na-eyiri.
N'ihe banyere Apple, ọnụ ọgụgụ ahịa nke Apple Watch adababeghị ka nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana ọnụọgụ ndị a na-egosi anyị ụzọ nke atọ na Business Wire, ha na-emebi ihesi na 5,6 nde ngwaọrụ erere na nde 2,7. N'aka nke ọzọ, na nke Apple, enweghị ndị ọnụ ọgụgụ gọọmentị ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ebipụtaghị ha kemgbe elekere ahụ na-ere ere, mana a na-eme atụmatụ ahụ site na mbupu ngwaahịa.
Ọ bụkwa eziokwu na e mebeghị Samsung Gear ọhụrụ dị ka ụdị Pebble ọhụrụ ahụ, Apple Watch Series 2 abịabeghị n'oge iji banye ọnụ ọgụgụ ndị a mana ke ofụri ofụri o yiri ka ndị a ngwaọrụ adịghị nnọọ buut elu. Ma gị onwe gị, ị nwere elekere anya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ere nke smart nche na-aga n'ihu ịjụ
Google Pixel XL nwere ihe nrụpụta nke $ 285
Opera na - enye gị ohere ịchọgharị ọsịsọ 86%